Weriyaha VOA-da ee Galkacyo oo la xiray & suxufiyiinta gobolka oo shir ka yeeshay xarigiisa. – Radio Daljir
Weriyaha VOA-da ee Galkacyo oo la xiray & suxufiyiinta gobolka oo shir ka yeeshay xarigiisa.
Galkacyo Dec 21 – Kulanka ballaaran oo ay maanta iskugu yimaadeen saxufiyiinta ka hawlgasha gobolka Mudug ayey kaga hadleen xarigga Maxamed Yaasiin Isaxaq oo ah wariyaha idaacadda VOA-da, laanta af-Soomaaliga ee gobolka Mudug oo xalay lagu xiray Galkacyo.
Kulanka ay maanta suxufiyiintu iskugu yimaadeen ayay kaga hadleen falalka tacadiyada ah ee loo gasyto dhamaman wariyaasha ka hawlgala Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Mudug oo muddooyinkii ugu danbeeyey ka kulmayey falal xarig iyo handadaad iskugu jira, waxayna si gaar ah u faaqideen xarigga Maxamed Yaasiin iyo sidoo kale xabado todobaadkaan dhaxdiida lagu riday Xasan Maxamed Jaamac Jidka, Agaasimaha idaacada Galkacyo, xilli ku sugnaa garoonka magaalada Galkacyo.
Dood dheer oo ay suxufiyiintu yeesheen ayay ka soo saareen ku go?aamo ku saabsan aragtidooda ku wahajan sida ay u arkaan falkaasi gaar ahaan midkii ugu danbeeyey ee lagu xiray wariyihii idaacadda VOA-da ee gobolka Mudug.
Waxaayna cambaarayn u soo jeediyeen ciddii falkaasi ka danbaysay, iyagoo wax laga xumaado ku talmaamay habka xariga wariyahaasi loo maray, waxayna maamulka ka codsadeen in si deg deg ah loo sii daayo wariyaha.
Qaar ka mid ah mas?uuliyiinta maamulka gobolka Mudug oo ay wariyaashu wax ka weydiiyeen sababta xarigga ayaa ka gaabsaday in ay faafaahin ka bixiyaan ujeeddada xarigga wariyaha, waxayna sheegeen in uu jiro amar sare oo ka yimid xagga dawladda oo ku saabsan xarigga suxufiga.
Warar horudhac ah oo laga helay wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa sheegaya xarigga wariyuhu in uu salka ku hayo warar uu ka diyaariyey dad ka cararay rabshado dhawaan ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland oo ay magaalada Galkacyo ka mid tahay, waxaana warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in wariyaha lagu hayo xabsi ku yaalla magaalada Garoowe.
Wariyaha oo illaa iyo haatan aan si rasmi ah loo garanayn halka uu ku xiran yahay ayaa xalay la xiray isaga oo ku sugan gurigiisa, saacaddu markii ay ahayd 11:00 caweysnimo sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah eleladiis; waxaana wariyaha ka kaxaystay ciidamada amniga.